Ungabi yiPunk, yiba yiHunk futhi Chunk Okuqukethwe Kwakho | Martech Zone
Lokho ukunuka, uxolo! Sethemba ukuthi ikunakile. UDan Zarrella uneposi elihle kakhulu ekunqamuleni okuqukethwe kwakho. Ngiphinda ezinye izeluleko zakhe bese ngifaka okuncane kwami.
Kube nenqwaba yocwaningo ngokuziphatha kwabavakashi bewebhu nokuthi bafunda kanjani futhi badlulise ama-athikili namakhasi kusiphequluli sewebhu. Indlela ejwayelekile yezivakashi zewebhu ukufunda idatha noma izihloko ku iziqubu kunokuba ufunde i-athikili phezulu phansi. Ngokwami, ngike ngazabalaza ngibhala ngale ndlela, kepha ngiyaqhubeka nokuzama. Ukwehlukanisa izingcezu zokuqukethwe ngezihloko ezingafakwa isibindi, ezinemibala ehlukile, noma ezinkudlwana ngosayizi kuzovumela izivakashi zakho ukuskena okuqukethwe kwakho ngokushesha. Ngokwengeziwe, ukwahlukanisa izigaba zakho kunika amandla abasebenzisi ukuskena ngokushesha, kwesinye isikhathi kweqa ukusuka ekuvuleni umusho kuya kumusho wokuvula kunokufunda yonke imininingwane phakathi.
Ngabe ukuthole konke lokho?
Mhlawumbe… mhlawumbe hhayi! Kungenzeka ukuthi weqa ngqo kulokhu isinqamu. Bhala ama-athikili akho nokuthunyelwe kwakho ngandlela thize ukuze kube lula ukuzulazula nokuqonda:
Sebenzisa Umbhalo Ogqamile - ivelele, akunjalo?
Sebenzisa izihlokwana - Izihlokwana zivumela abantu ukuthi baskene ngokushesha okuqukethwe.
Sebenzisa Isikhala Sesigaba - Isikhala sihlukanisa okuqukethwe futhi sivumela izivakashi ukuthi zifunde ngokushesha imisho yokuvula.
Sebenzisa Uhlu Olunezinhlamvu kanye Nezinombolo - lokhu kuhlelekile futhi kufundeka kalula.
Bhala iziqu ezi-5 kuye kwezi-10 - zama yomibili imikhawulo futhi uhlale ungaguquguquki kwinani lezigaba (okungukuthi iziqephu) kokuqukethwe kwakho. Ukungaguquguquki kuzosiza ekugcineni abafundi ngoba ubeka okulindelwe ngabafundi.
Angizange nginqume ingxenye yokuqala yalesi sihloko ngamabomu, futhi kukhombisile, akunjalo? Amathuba ukuthi awusifundanga leso sigaba esigcwele.
Akukona okwamabhulogi nje kuphela!
Nginecala njenganoma ubani ngokungacabangi, kepha ngizosebenza kanzima kukho. Kufanele futhi, ... kube iwebhusayithi yakho noma ibhulogi yakho, izivakashi zizogcina okuningi mayelana nesayithi lakho kanye nama-athikili alo kunokuba unganqamuki. Lapho bekhumbula okuningi, bazobuyela kokunye!
Tags: iziqubuukuqondaukunqamula kokuqukethweukufometha kokuqukethweukuskena kokuqukethweUDani zarrella
I-Technorati Rank WordPress Plugin Version 2.0.4 Ikhishwe
Ngo-Apr 22, i-2007 ku-7: i-59 PM
UDoug, iseluleko esihle, ngisebenzisa ukusebenzisa izihloko zezindaba maqondana nezikhulu eziphezulu ngoba bengazi ukuthi zifushane ngesikhathi futhi nginganquma ngokushesha uma incwadi yami isifanele isikhathi sabo